Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Canada hanolotra tranokala mitoka-tena vaovao amin'ny COVID-19
Ny Governemanta Canada dia miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka mba hiarovana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny Kanadiana sy ny mpiasa vahiny vonjimaika any Canada, ary hampihena ny fiparitahan'ny COVID-19 sy ny karazany ao Canada. Ny fitokan-tena dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra amin'ny fampitsaharana ny fihanaky ny COVID-19.
Na izany aza, ho an'ny olona sasany any Canada, ny toetry ny trano be olona sy ny vidiny lafo dia mety hahatonga ny tenany ho tsy azo antoka na tsy azo atao ny mitoka-tena, ka mampidi-doza ny tenany, ny fianakaviany ary ny vondrom-piarahamonina tsy ho azy ireo.
Androany, i Jean-Yves Duclos, Minisitry ny Fahasalamana, Andriamatoa Jean-Yves Duclos, dia nanambara mihoatra ny 5 tapitrisa dolara hanohanana ireto tetikasa roa manaraka ireto any Kolombia Britanika, amin'ny alàlan'ny fandaharan'asan'ny Governemanta Canada's Safe Voluntary Isolation Sites:
• fandaharan'asa famerenam-bola mifototra amin'ny mpampiasa ho an'ny mpiasa amin'ny fambolena monina sy miasa manerana an'i Kolombia Britanika amin'ny alàlan'ny Minisiteran'ny Fambolena, Sakafo ary Jono ao amin'ny Governemanta Kolombia Britanika mba hanampy amin'ny fanohanana ny filàna fitokanana ny mpiasa amin'ny fambolena; SY
• toerana mitoka-monina an-tsitrapo azo antoka ao amin'ny Tanànan'i Surrey amin'ny alalan'ny Fraser Health Authority.
Ny tranokala mitoka-tena an-tsitrapo dia manampy ny olona voan'ny COVID-19 — na efa niharan'izany — hiditra amin'ny trano fitokanana azo antoka mba hitazomana ny tenany sy ny mpiara-belona aminy. Ireo tranokala ireo dia ankoatry ny trano ho an'ny olona tsy manan-kialofana izay mila mitoka-monina noho ny fitsapana tsara.
Ny tranokala mitoka-monina an-tsitrapo dia mampihena ny mety hiparitahan'ny viriosy eo amin'ireo olona mifandray amin'ny tokantrano amin'ny toe-javatra misy ny olona miatrika trano feno olona ary tsy manana safidy hafa. Ireo tranokala ireo dia iray amin'ireo fitaovana famaliana haingana natsangana mba hampitsaharana ny fiparitahan'ny COVID-19, ary azo apetraka amin'ireo vondrom-piarahamonina miatrika valan'aretina.
Ny Fandaharan'asa Safe Voluntary Isolation Sites dia manohana mivantana ny tanàna, kaominina ary faritra ara-pahasalamana izay atahorana amin'ny fifindran'ny vondrom-piarahamonina COVID-19. Ireo tranonkala voafantina ao anatin'ny Fandaharana dia manome toerana azo idirana ahafahan'ny olona mitoka-tena soa aman-tsara mandritra ny fe-potoana takiana. Ny tompon'andraikitra amin'ny fahasalamam-bahoaka eo an-toerana dia mamaritra ny olona mendrika izay azo omena safidy hifindra any amin'ny toerana mitokana amin'ny fomba an-tsitrapo mba hitazomana azy ireo sy ny fifandraisany amin'ny ankohonany mandritra ny fipoahan'ny vondrom-piarahamonina misy azy.